Lehilahy iray izay nilaza ho very moto ny alarobia faha 24 jona teo no tonga nametraka fitoriana teo anivon’ny SUT(Sureté Urbaine de Toamasina) tamin’io andro. Nilaza ity mpitory fa hitany ao an-tokontanin’olona monina eny Tanambao verrerie io moto any io. Nidina ifotony avy hatrany ny Polisy ka hita tao amin’ilay toerana tokoa ny moto iray mifandraika amin’ny fitantaran’ilay mpitory. Rehefa tafiditra ilay trano ny Polisy dia mbola nisy moto scooter maro efa noravàna, sy fitaovana maro niparitaka eran’ny trano. Nosamborina avy hatrany ny lehilahy tompon-trano miisa efatra ary nentina nanaovana fanadihadiana. Nogiazana avokoa moa ireo moto miisa 06 tratra tao amin’ilay trano. Ny SUT Toamasina moa no manao ny fanadihadiana.